कर्मचारीको कनेक्सनमा ठग्ने मेनपावरको स्टिङ-५ लाख फिर्ता, अष्ट्रेलियाका विद्यार्थीका फलोअप ! (भिडियो) – Anurag Post
Home / अनुराग पोष्ट / कर्मचारीको कनेक्सनमा ठग्ने मेनपावरको स्टिङ-५ लाख फिर्ता, अष्ट्रेलियाका विद्यार्थीका फलोअप ! (भिडियो)
Anurag Post February 21, 2019	अनुराग पोष्ट, अन्तर्वार्ता, भिडियो, राजनीति Leaveacomment 201 Views
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३४३ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । यसका साथै कार्यक्रममा विशेष ब्यक्तित्वहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिएको छ ।
आजको एपिसोडमा निम्न विषयमा रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छः
१. अष्टे«लियामा नेपाली विद्यार्थीको सकसः कसरी निस्किन्छ निकास ?
काठमाडौं । गत कार्यक्रममा अस्टे«लिया पुगेका नेपाली बिद्यार्थीहरुले कलेजको बदमासीको कारण आँफूहरुको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै लाइभ गुनासो गरे । अहिले यो बिषय सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । यो समस्या अस्ट्रेलियाको सिड्नी र बृजबेलमा रहेको अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआइबिटी) ले अस्ट्रेलियन सरकारको नर्सिङ काउन्सिलबाट नर्सिङ अध्ययन स्वीकृति नलिई सुरु गरेको कोर्समा १२ सय नेपाली विद्यार्थी भर्ना लिएकै कारण सिर्जना भएको हो ।
२. ‘ओम समाज कलेज’को बदमास– आफ्नै विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलवाड !
काठमाडौं । काठमाडौं ‘ओम समाज शैक्षिक प्रष्ठिान’ले हेल्थ असिस्टेन्ट अध्ययन गरेका विराटनगरका अरुण कुमार मण्डलका शैक्षिक कागजपत्र नै गायब बनाइदिएको छ । ३ बर्ष एचए अध्ययन गरेका उनले अस्पतालमा प्राक्टिकल गरे । तर प्राक्टिकलको अंक कलेजले नै दिनु पर्ने थियो । सीटीइभीटीका अनुसार प्राक्टीकल उनलाई फेल गर्न मिल्ने थिएन तर कलेजले नै कम अंक पठाएपछि उनी पास आउट हुन पाएनन् ।
३. वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीको मेनपावरसँग कनेक्सन !
काठमाडौं । खाडी मुलुकमा जाने नेपालीहरका लागि सरकारले फ्री भिषा फ्री टिकट भने पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । सरकारले खाडी मुलुकका लागि सेवा शुल्क वापत १० हजार मात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यस बाहेक युरोपका देशहरुमा जान सरकारले सेवा शुल्कका लागि ८० हजार मात्रै लिन पाइने व्यवस्था । तर काठमाडौंमा रहेको अधिकांश मेनपावरले युरोपका देशमा कामदार भिषामा लैजाने भन्दै लाखाँै रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । काठमाडौ बसुन्धरामा रहेको क्यापिटल रिक्कुमेन्ट सर्भिसेस प्रा.ली.ले ग्रिसका लागि कामदार भिषा भन्दै सेवाग्राहीसँग ७ लाख लिदै गरेको अवस्थामा हाम्रो स्ट्रीङ अप्रेशनबाट खुलेको छ ।
Previous विवादपछि गायक पशुपति शर्मा पहिलो पटक न्यूज–२४ टेलिभिजनमा
Next धनलाभका लागि राशी अनुसारका रूद्राक्ष धारण ! कुन राशिका लागि कति मुखे राम्रो ? पुरा पढ्नुहोस र सेयर गर्नुहोस